Ny teo anivon’ny Hery vonjy taitran’ny Polisy (FIP) Antanimora sy ny Kaomisaria Central eto Antananarivo Renivohitra ary ny teo anivon’ny « Direction Générale » etsy Anosy no notsidihany manokana ny alatsinainy 3 febroary teo. Nantitranteriny fa misy ny adidy sy andraikitra lehibe napetraky ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra tamin’ny polisim-pirenena. Voalohany ny famerenana ny hasim-panjakana amin’ny alalan’ny asa ataony. Nitaky amin’ny FIP ao Antanimora izy mba ho fitaratra amin’ny fomba fiaina, ny fihetsika, fitondran-tena ary ny fitafy. Tao amin’ny Commissariat Central kosa dia mbola nohamafisiny fa adidy mivaingana tsy maintsy atao ny famerenana ny hasin’ny polisim-pirenena. Natao ho azo tsapain-tanana sy miantraika avy hatrany any amin’ny vahoaka ny asan’ny polisy. Nasian-teny ihany koa ny mahakasika ny ady amin’ny kolikoly izay mbola hohamafisina hatrany. Notsindriany manokana ny tsy fisian’ny « corporatisme » nandritra ny fandraisany fitenenana teo anivon’ny « Direction Générale » etsy Anosy. Tsy azo ekena, hoy izy, ny fisiana olona vitsy hanimba ny ezaka efa natao ho fanatsarana ny polisim-pirenena. Ary farany dia homen-danja manokana ny maha olona na ny « valeur humaine ». Mila mahatsapa sy mahazo antoka ny vahoaka fa misy polisy mpiaro sy azo itarainana fa tsy ho biby fampitahorana.